Uyikhetha njani ilaptop yoyilo lwegraphic 2021 - Creativos Online | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nanini na xa sithatha isigqibo sokuthenga ilaptop entsha, sihlaselwa lihlabathi lokuthandabuza. Kusengqiqweni oko. Ayinguye wonke umntu osisazinzulu ngecompyuter okanye owaziyo ngenene into abayifunayo. Ukuba ungumdlali wevidiyo uya kudinga iinkcukacha ezithile. Ukuba uyisebenzisa kuyilo lwegraphic, abanye kwaye ukuba ulawula, ezinye zahluke ngokupheleleyo.
Kwimeko yokuyisebenzisa kuyilo lwegraphic uyakufuna amandla amakhulu. Inkqubo yolawulo efana ne-Excel ayizukufana nenkqubo yoyilo yemizobo efana ne-Illustrator. Ukwazi oku, siza kunyusa iimpawu zekhompyuter yethu. I-RAM, i-Graphics kunye nezinye izinto ezinje ngescreen ziya kuba nefuthe. Oku kuyonyusa njalo iindleko zekhompyuter. Siza kuqamba iimpawu zeelaptops kumacandelo ahlukeneyo, ngokwemali esiyifunayo okanye esinokutyala kuyo. Oko kukuthi, siza kwenza ikhompyuter ubuncinci bokusebenza.
Siza kuqokelela ezona ndawo zibalulekileyo zekhompyuter ikhompyuter yoyilo lwegraphic. Ezi ndawo zibalulekileyo ziya kuba lapho sinako ukuncinci ujikeleze phambili xa kuziwa ekufumaneni ilaptop elungileyo. Nangona icacile, zezona zinohlahlo-lwabiwo mali oluphezulu.
1 Iprosesa, ingqondo yokusebenza
2 Imemori ye-RAM
3 Ikhadi le-GRAPHIC, isiqwenga sonke esisijongileyo
4 I-Hard drive, i-SSD engcono
5 Ezinye izixhobo
Iprosesa, ingqondo yokusebenza
Okona kubaluleke kakhulu, yonke into ejikelezileyo kufuneka ilawule. Akufanele ugcine malunga noku kwaye kufuneka sikhethe ngokwento efana nekhadi lemizobo esiza kuthetha ngalo kamva.
Kulula ukudibana nenkqubo ye-Intel, iprosesa ebanzi kakhulu. "Umhlobo" we-Apple kunye nohlu olubanzi lweemodeli. Ndigxininisa, kuba kukho iiprosesa ze-AMD, ezithi 'zinegama' elincinci, nazo zilungele ukusetyenziswa.
Kule nkalo kukho ukwahluka kwezimvo. Kwimeko yoyilo loMzobo, kulungile ukufumana iprosesa ephezulu, ke akukho namnye kubo oya kwenza ingxaki kuwe. Apha uqoqosho luyaphazamisa. Kwiilaptops sihlala sifumana i-Intel ngokuzenzekelayo, ke jonga ilaptop ene-Intel i7 processor (Ukuveliswa kunye nesantya kuya kuxhomekeka kunyaka). Kwaye ubuncinci iprosesa ye-Intel i5, kodwa gcinani engqondweni ukuba iprosesa ye-Intel i9 yaphuma, ke unyaka ngamnye oyigqithayo iya kuba ngasemva ngakumbi. Ukuba ufumana ilaptop eneprosesa ye-AMD, qiniseka ukuba yi-AMD Ryzer 7 nangaphezulu.
Inani lee-cores kunye nokusebenza kwazo kubalulekile. Ezinye iinkqubo kunye nemisebenzi iyazuza kwinani elikhulu lee-cores, ezinje ngezo zibandakanya ukuhanjiswa kweenkqubo, ngelixa kwezinye iimeko kucetyiswa ngakumbi ukuba ne-cores ezimbalwa kodwa ngamandla amakhulu.
I-RAM yeyona nto ibhetyebhetye. Kwaye ndithetha oku kuba awuzukuyifuna eyona brand. Ingxaki ngeelaptops kukuba kunzima ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwe-RAM. Kodwa ukuba kufuneka sizazise kakuhle ngenani leigigs kunye nesantya kwi-MHz abanayo.
Ubuncinci esiza kuyidinga yi-8 GB Imemori ye-RAM. Kwaye eyona icetyiswayo yi-16 GB. Ngelo xesha ungakhetha i-12 GB. Konke kuxhomekeke kwiimpawu zelaptop. Isantya kufuneka sibe yi-1600 Mhz kuba ezidlulileyo zindala kakhulu.
Ikhadi le-GRAPHIC, isiqwenga sonke esisijongileyo
Xa kuziwa ekuthengeni ilaptop, into yokuqala esiyijongileyo yileyibhile ethi leliphi ikhadi lemizobo onalo. Ilebheli ebomvu evela kwi-AMD okanye uluhlaza oqhelekileyo ngakumbi ovela eNvidia. Abanye abantu bayaphazama ngokucinga ukuba yeyona nto ibalulekileyo. Nangona kunjalo kubaluleke kakhulu, ukuba ezi zinto zingasentla azithathelwa ngqalelo, ayixabisekanga kakhulu.
Ukuba siqwalasele izinto zangaphambili kwaye sichanekile, kuya kufuneka sijonge kwilebheli. I-GTX okanye iRADEON kunye neenombolo ezingapheliyo ziya kuvela kubo. Ikhadi lemizobo lixhasa i-CPU ukukhawulezisa ukulungiswa kwemifanekiso, kwaye ukuba nemodeli elungileyo kunokusisindisa ixesha elininzi, ke akufuneki ubeke ukhetho lwakho ecaleni.
Eyona ndawo ixhaphake kakhulu kwaye enye iyacetyiswa ukuba ihambelane neenkqubo ezithile zokuhlela yiNvidia. Kule meko siya kuhlala sifuna uluhlu oluphakathi okanye oluphezulu. Ubungcali bukaNvidia kuyilo lweGraphic lenze uluhlu lweNvidia Quadro. Kwimeko apho singenakufumana ilaptop enolu luhlu, siya kujonga iNvidia Geforce GTX. Ngale ndlela siyaqiniseka ukuba asilifumani iKhadi leMizobo elidityanisiweyo kwinkqubo yethu.
I-Hard drive, i-SSD engcono
Ubunzima bazo zonke iinkqubo oya kuthi uyile uyile ziya kuqhutywa yidiski enzima. Ukuqala ngenkqubo yokusebenza. Kulapho kufuneka silinganise khona kwihard drive ekhawulezayo. Kuqhelekile ukuba kucingwe kwaye kugqitywe kwi-hard drive enkulu. Kwabaninzi oko kulingana nomgangatho kunye nokuthembeka. Kwelinye icala, ayinabunzima kwikhompyuter yethu. Isantya kwi-RPM kunye ne-SSD engoyena mntu ngawona manqaku aneempembelelo zokuthatha isigqibo kwelinye. Nangona kuyinyani ukuba ilaptop ene-HDD ihlala inejubane le-5400 rpm, kwi-7200 rpm yedesktop. I-SSD hard drive inesantya esiphezulu kune-HDD eyandulelayo.
Ngenxa yoko zibiza kakhulu kwaye zithande ukuzisa amandla amancinci. Kodwa amandla anokulungiswa ngokuqhutywa kwangaphandle. Kubalulekile ukuba xa ulayisha imifanekiso kunye neevidiyo oza kuzisebenzisa emsebenzini wakho njengomyili, unikezelo lwenziwa ngendlela enamanzi. Okukhona kukho isithintelo ngakumbi ekwenzeni lo msebenzi, kokukhona usiba semngciphekweni wokuba inkqubo ixhonywe kwaye isuse uxwebhu lwakho.
Eyona nto ilunge kakhulu kukuba ne-SSD encinci -128 GB- kunye ne-HDD yangaphandle yesayizi oyifunayo.
Nje ukuba ugqibe ilaptop yakho. Kubandakanya zonke izinto ezingentla ekufuneka zithathelwe ingqalelo, Kubalulekile ukuba uyazi ukuba ilaptop ayinakukhathazeka xa uyila. Ubuncinci ngezixhobo zayo zemveli-sithetha nge-trackpad kunye nekhibhodi ngokungagqibekanga-.
Ukuhamba nayo, ithebhulethi enje ngeWacom Graphics Tablets kunokuba luncedo olukhulu kuyilo. Ukuba awuzithandi kakhulu ezi pilisi zemizobo, unokukhetha imouse yangaphandle kunye nekhibhodi. Impuku ye-ergonomic ibalulekile. Kwaye uhlobo lwebhodi yezitshixo luya kuxhomekeka kukhetho lwento nganye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyikhetha njani ilaptop yoyilo lwegraphic
Inqaku elilungileyo enkosi ngolwazi
Phendula ku-https: //www.racocatala.cat
Inqaku elungileyo enkosi ngolwazi!
Ndiza kuqala izifundo kwimultimedia kunye nobugcisa bedijithali, ndifuna ilaptop kwaye andazi ukuba ndiza kukhetha yiphi. Ndine-xp-pen Deco Pro Para yemizobo yetafile yoyilo lwegraphic. Ndiphanda ukuba ilaptop yam izakuba yintoni (yoyilo lwegraphic kunye nemisebenzi yokuphinda ubambe iifoto, ngakumbi iinkqubo ezinje ngeFotohop, i-Illustrator kunye neLightroom).